मोदी प्लेनबाट ओर्लिदै गर्दा जनकपुरमा झडप, अवस्था तनावग्रस्त ! — Sanchar Kendra
मोदी प्लेनबाट ओर्लिदै गर्दा जनकपुरमा झडप, अवस्था तनावग्रस्त !
काठमाडौँ, २८ बैसाख ।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपालको दुईदिने राजकीय भ्रमणका लागि जनकपुर आइपुगेका छन् । उनको नेपाल भ्रमण जनकपुरबाट शुरु भएको छ ।
भारतीय वायुसेनाको हेलिकोप्टरबाट प्रधानमन्त्री मोदी आज साढे १० बजेपछि जनकपुर अवतरण गरेका हुन् । प्रधानमन्त्री मोदीको यो तेस्रो नेपाल भ्रमण हो ।
जनकपुर विमानस्थलमा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीलाई रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल र प्रदेश नं २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले स्वागत गरेका छन् ।
भ्रमण कार्यतालिकाअनुसार भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी जनकपुर विमानस्थलबाट जानकी मन्दिर जानेछन् । मन्दिरमा उनले विशेष पूजाअर्चना गर्ने परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यसैबीच मोदी जनकपुर पुग्दा त्यहाँ झडपको स्थिति सिर्जना भएको छ । केपो ओली सरकारले मोदीको स्वागतमा आउन २ नम्बर प्रदेशवासीलाई उर्दी जारी गरेपछि सर्वसाधारणहरु भोकभोकै बिहानैदेखि लाइनमा छन् । मोदी त्यहाँ प्लेनबाट ओर्लिएपछि सर्वसाधारणको भिडले झडपको स्थिति लिएको हो ।
भिड नियन्त्रण गर्न प्रहरीलाई हम्मेहम्मे परेको छ । लमठेल भएपछि कतिपय व्यक्ति बार नाघेर भित्र प्रवेश गर्न खोजेपछि प्रहरीले लाठीचार्ज समेत गरेको थियो ।
मोदीलाई गरिने अभिन्नदनस्थल रंगभूमि १२ विघा पुग्न पनि सर्वसधारणले सास्ती खेप्नु परेको छ। बिहान ६ बजे देखिनै लाइन बस्न स्थानीय सरकारको ठाडो आदेश दिएपछिस्थानीयहरु भोकभोकै बिहानैदेखि जबर्जस्ती लाइनमा बस्न बाध्य भएका छन्।
नरेन्द्र मोदीको स्वागतका लागि जनकपुर पुगेका ओलीले तनाव ब्यबस्थापन गर्न पनि स्थानीय सरकारलाई दबाब दिएका छन् । जानकी मन्दिरमा दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले संयुक्तरूपमा रामायण सर्किटको उद्घाटन तथा हरियो झण्डा देखाएर जनकपुरधाम–अयोध्या बससेवाको शुभारम्भ गर्नेछन् ।
त्यसपछि प्रधानमन्त्री मोदी प्रदेश सरकार र जनकपुर उपमहानगरपालिकाद्वारा बाह्रबिघा मैदानमा आयोजना हुने नागरिक अभिनन्दन नामक आमसभा समारोहमा सहभागी हुनेछन् ।
जनकपुरमा नागरिक अभिनन्दनपछि प्रधानमन्त्री मोदी दिउँसो हेलिकोप्टरबाट काठमाडौँतर्फ प्रस्थान गर्नेछन् । आजै प्रधानमन्त्री ओलीको उपस्थितिमा भारतीय समकक्षी मोदीलाई सैनिक मञ्च टुँडिखेलमा नेपाली सेनाले गार्ड अफ अनर प्रदान गर्ने कार्यक्रम छ ।
त्यसपछि उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनसँग प्रधानमन्त्री मोदीले कान्तिपथस्थित उपराष्ट्रपति कार्यालयमा शिष्टाचार भेट गर्नेछन् । त्यसपछि आजै प्रधानमन्त्री मोदी शीतलनिवास पुगेर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग शिष्टाचार भेट गर्नेछन् ।
भ्रमणका क्रममा दुई प्रधानमन्त्रीबीच आजै द्विपक्षीय आपसी हित सम्बन्धमा औपचारिक भेटवार्ता हुने परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ । साथै, संयुक्त पत्रकार सम्मेलन तथा अरुण तेस्रो जनविद्युत् परियोजनाको उद्घाटनसमेत गरिनेछ ।
भोलि वैशाख २९ गते बिहानै प्रधानमन्त्री मोदी मुक्तिनाथ दर्शनका लागि मुस्ताङतर्फ प्रस्थान गर्नुहुनेछ । मुक्तिनाथमा पूजापछि उनी बिहान करीब १०ः३० बजे मुक्तिनाथबाट काठमाडौँ फिर्ता हुनेछन् ।
प्रधानमन्त्री मोदीलाई शनिवार दिउँसो २ः४५ बजे काठमाडौँ महानगरपालिकाले नागरिक अभिनन्दन गर्नेछ । दुईदिने नेपालको राजकीय भ्रमण पूरा गरी उनी वैशाख २९ गते नै स्वदेश फिर्ता हुनेछन् ।
मोदीको नेपाल भ्रमणसम्बन्धि यी सामाग्री पढ्न छुटाउनुभयो की ?
तनाव बढेपछि पाइजामा लगाएर आफै जनकपुर पुगे ओली ! मुख्यमन्त्री रावतलाई के भने ?
ओलीको राष्ट्रवाद चिहानमा पुगेको भन्दै मोदीको नेपाल भ्रमणबारे नेकपाले मुख खोल्यो (विज्ञप्तिसहित)
वाईसीएल अध्यक्ष दिपसीखाले ओलीलाई ‘लम्पसारवादी’ भनेपछि एमालेभित्र खैलाबैला
नेपाल आउनुअघि लगातार तीन वटा ट्वीट गर्दै मोदीले यसो भने
भोलि सार्वजनिक विदा, जनताले मास्क लगाएर हिड्न पनि नपाउने, कारण नरेन्द्र मोदी !
मोदी नआउदै मधेसमा घट्यो यति ठुलो घटना, तीनको मृत्यु, कराडौंको क्षति
नाकाबन्दी सम्झिदै मोदीबिरुद्ध खनियो सामाजिक सञ्जाल, भारतीय दूतावासमा शक्तिशाली भूकम्प !
मोदी नपुग्दै जनकपुरमा यस्तो लफडा, प्रहरीलाई तनाव (तस्वीरसहित)